हिमालयन बैंकको नाफामा ६२.५० प्रतिशतले कमी | Artha News Nepal
Home	बैंकिङ	हिमालयन बैंकको नाफामा ६२.५० प्रतिशतले कमी
हिमालयन बैंकको नाफामा ६२.५० प्रतिशतले कमी
by अर्थन्यूज माघ १५, २०७७
काठमाडौं – हिमालयन बैंक लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा घटेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६२.५० प्रतिशतले कमी आएको हो ।
गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा रु. १ अर्ब ७४ करोड खुद नाफा कमाएको बैंकले चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा रु. ६५ करोड ३२ लाख खुद नाफा कमाएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा रु. १ अर्बभन्दा बढीले कम हो ।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी रु. २ अर्ब ५७ करोडबाट घटेर रु. १ अर्ब ७५ करोडमा झरेको छ । त्यसैगरी, अन्य सञ्चालन आम्दानी रु. ७ करोड ७२ लाखबाट घटेर १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ झरेको छ । जसले गर्दा बैंकको सञ्चालन नाफा पनि घटेर रु. ९८ करोडमा झरेको छ । गत वर्ष यस्तो नाफा २ अर्ब ११ करोड थियो ।
बैंकले खर्च भने खासै बढ्न दिएको छैन । उसको कर्मचारी खर्च रु. ८८ करोडबाट ७४ करोडमा झरेको छ भने अन्य सञ्चालन आम्दानी पनि झण्डै रु. ७ लाख घटाएको छ । हाल बैंकको चुक्तापूँजी रु. १० अर्ब ६८ करोड रहेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले १० लाखको बीमा रकम भुक्तानी गर्यो
एभरेष्ट बैंकको संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत
प्राइम कमर्सियल बैंकले फागुन १९ गतेदेखि ऋणपत्र निष्कासन गर्ने